Min xero qaxooti ilaa iyo Shaambo samayn; Nolosha Rowdo Axmed | Ceerigaabo News
Min xero qaxooti ilaa iyo Shaambo samayn; Nolosha Rowdo Axmed
Rowdo waxay ka aasaastay magaalada Kismaayo warshad yar oo gurigeeda ku dhextaala oo lagu farsameeyo noocyada Shaambada, taasoo ay u iibgeeyso xaafadaha dariskeeda ah.Rowdo intii ay ku jirtay xeryaha qoxootiga waxay baratay sida loo farsameeyo noocyada shaambada taasoo keentay markay magaalada ku soo laabatay inay gurigeeda ku sameyso noocyada shambooyinka ee dharka iyo guryaha lagu dhaqo.
Walxo kiimiko ah oo leh cabirro kala duwan ayay isku dartaa, ka dibna iyadoo farsamadeeda adeegsanaysa ayay biyo ku dartaa, taasoo qaadata mudo ku dhaw labo saacadood si ay u soo saarto shaambo la isticmaali karo.
“Shaambada ayaan guriga ku dhex samaystaa, shaambadana waxaa iga gata dariska, dukaamada xaafada, guriga dhexdiisaa la iiga gataa, aniga xitaa waan isticmaalaa, waxaana ka kaaftoomay shaambadii aan suuqa ka soo gadan jiray maadaama aan gacantayda ku soo saartay, waxayna ka kooban tahay walxo kiimiko oo aan isku daray oo aan banaanka ka keensaday” ayay tiri Rowdo Axmed.
Rowdo waxay mustaqbalka ku fikiraysaa in warshaddan yar ee gurigeeda ku dhextaala ay u badasho warshad wayn oo dad badan ay ka shaqeeyaan, lehna macaash farabadan.
Rowdo kuma ekaan inay farsamayso shaambooyinka oo kaliya ee waxay waqtigeeda uga faa’iidaysaa in gabadhaha kale ee ka soo laabtay xerooyinka qoxootiga ay barto sida loo sameeyo shaambada.
Gabdhaha ay tababarto waxa kamid ah Xabiibo Xabiib Cabdullahi oo sanadkan uun ka soo laabtay xeryaha qoxootiga ee Kenya, waxayna doonaysaa inay si wanaagsan u barato sida loo sameeyo shaambada si mustaqbalka ay ugu aydo.
Xabiibo oo ka hadlaysa sababaha ay u baranayso sida loo sameeyo shaambada ayaa tiri. “Marka koowaad waa inaan anigu ka faa’iido oo aan ka kaaftoomo shaambadii aan suuqa ka soo gadanayay,marka labaad inaan ganacsi ka sii sameeyo oo aan xarun furto kana faa’iido si aan u soo saarto nolol maalmeedkayga”
Image captionDumar kale ayaa iminka ka barata Rowdo sida Shaambada loo sameeyo
Rowdo waxay bishii ganacsigan ka heshaa ilaa 180 dollar. Waxa ayna ku maareysaa nolosha qoyskeeda. Waxay ku talo jirtaa ballaarinta ganacsigeeda.
Waa sheeko ka soo bilaabatay xero qaxooti oo ku taalla dal jaar ah, oo tiir u noqon karta ka qeybqaadashada kobcinta dhaqaalaha qoysas badan, oo ka soo laabtay xeryaha qaxootiga.
In ka badan konton kun oo qoxooti Soomaali ah ayaa si iskood ah dalka ugu soo laabtay tan iyo markii ay bilawday hay’adda qoxootiga qaramada midoobay ee UNHCR oo kaashanaysa dawladda, mashruuca dib u celinta qoxootiga Soomaaliyeed sanadkii 2014 kii.